पत्रिका लक हुदाँ मन खिन्न | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
पत्रिका लक हुदाँ मन खिन्न
९ असार २०७७, मंगलवार २०:१४
म कविता खड्का । पर्सा जिल्लाको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित मध्य नेपाल मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित मध्य नेपाल सन्देश साप्ताहिक पत्रिका तथा मध्य नेपाल डट कम अनलाइनको सम्पादक हुँ । २०७३ सालदेखि वीरगन्जका महिला पत्रकारहरूको सक्रियातामा पत्रिका प्रकाशन हुँदै आएको छ । एक वर्षअघिदेखि हामीले आफ्नै कलर छापाखाना संचालन गरी रंगीन पत्रिका प्रकाशित गरिरहेका छौं ।
हाम्रो पुस्ताले भोग्न परेका जटिल समस्यामध्ये ‘कोभिड-१९’ को महामारी सबैभन्दा ठूलो होला । यस महामारीले सिंगो विश्वलाई तहसनहस पारेको छ । यो पक्कै पनि डरलाग्दो र अकल्पनीय घटना हो । हामीले जुन सूचना पाइरहेका छौँ त्यसले भूलभुलैया सृजना गरिरहेको भान हुन्छ ।
कोरोनाले बिहान बेलुकीको छाक टार्न गाह्रो भएका गरिब, मजदुर, कामदारलाई सबैभन्दा बढी मारमा पारेको छ । यी वर्गका लागि ल्याइएका सामाजिक सुरक्षा र राहतका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले लागू नभएकाले र अनियमितता गर्नेलाई कडा कारबाही नभएकाले असफल भएका छन् । यो कुरा मेरो मनमा उकुसमुकुस भएर गाँठो परेको छ । कुन उपाय र कस्तो संयन्त्र अपनाउँदा मानिस उत्तरदायी बन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पाइँदैन ।
नोवेल कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको धेरै दिन भइसकेको छ । लकडाउनको पालना गर्दै र सावधानी अपनाउँदै हाम्रो टिमले आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको छ । कहिले घर त कहिले कार्यालयमा बसेर लकडाउनको समयमा मानिसले भोग्नुपरेका समस्याबारेमा निरन्तर सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेरण गरिरहेका छौँ ।
लकडाउनका बेला पाठकसम्म पत्रिका पुर्‍याउन नपाउँदा हामीलाई बढी पिरोलो भएको छ । पत्रिकाको छापिएको कपी सबै पाठकसम्म सजिलो गरी पुर्‍याउन नसके तापनि पीडीएफ संस्करण र अनलाइनमार्फत समाचार पुर्‍याउने काम हामीले निरन्तर गरेका छौं । तर पत्रिका पढ्दा पाइने सन्तुष्टि पाठकले पाएका छैनन् ।
पाठकले पनि हाम्रो समस्या बुझेका छन् । पत्रिका पढ्न नपाउँदा खल्लो भयो, कतै पत्रिका बन्द त हुँदैन ? लौ न कसरी पढन पाइन्छ ? हामीले पत्रिका पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो भन्ने प्रश्न र अनुरोध पाठकले गरिराख्नुभएको छ । हामीले अहिले ईमेल, फेसबुक र अनलाइनका माध्यमबाट मात्र उहाँहरूलाई समाचार र लेख दिन सकेका छौँ । हाम्रा नियमित पाठकका कतिपय प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन मैले सकेको छैन । प्रयास नगरेको भने होइन । तर के गर्ने सीप नभएपछि आफूले चाहेर पनि केही गर्न नसकिंदो रहेछ । अहिले मलाई त्यस्तै भएको छ । पत्रिका निकाल्दा हामी टिममा काम गर्दथ्यौं । सम्पादन तथा स्टोरी तयार गर्ने काम मेरो थियो । प्राविधिक कामतिर मैले ध्यान दिइनँ । त्यो सीप सिक्नेतर्फ मेरो ध्यान नै गएन । अहिले त्यही सीप नसिकेकोमा पछुतो भइरहेको छ । आफूले काम गर्ने क्षेत्रका लागि चाहिने सबै सीप हासिल गर्न जरुरी रहेछ भन्ने आज मलाई महसुस भएको छ ।
प्राविधिक सीप नसिकेकाले अहिले पत्रिका लेआउट गर्ने र छाप्ने काम म आफैंले गर्न सकेको छैन । अरूलाई बोलाएर यो काम गराउन पनि सकेको छैन । पर्याप्त सामग्री भएर पनि प्राविधिक सीप नहुनाले पत्रिका निकाल्न नपाएकोमा मलाई साह्रै दुःख लागेको छ । मैले दिने सूचना नै लक भए जस्तो लागेको छ । साधन भएर मात्रै नहुँदो रहेछ । साधनको उपयोग गर्ने तरिका पनि जान्नुपर्ने रहेछ ।
आमसंचारको भूमिका सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले बढी छ तर यस्तै बेलामा हाम्रो पत्रिका निकाल्न नपाउँदा मन खिन्न भएको छ । यसबाट मैले आफूलाई चाहिने सबै सीप समयमै सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिक्ने अवसर पाएँ ।